Ukubuyekezwa kwephrinta ye-Flash Flash Disk China Manufacturer
Incazelo:Ukubuyekezwa kwephrinta ye-Flash Flash Disk,Iphrinta ye-USB Flash Disk ayifaki,Iphrinta ye-USB Flash Disk ayisebenzi
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-USB Flash Disk > Ukubuyekezwa kwephrinta ye-Flash Flash Disk
Umshini wamanani wephrinta ye-A3 UV uxhumeke kukhompyutha ngekhebula le-USB. Uma nje izithombe ezenzelwe (izithombe) zibe ikhomputha, bese uthumele isithombe kufayela le-prn, bese uthumela i-prn. ifayela ukuze umshini wokunyathelisa!
Iphrinta ye-USB Flash Disk ingaphrinta noma yikuphi ukufometha kwesithombe nanoma yisiphi isayizi, iphrinta ye- USB Flash Disk Inkjet engasetshenziswa ingasetshenziselwa umhlobiso nokukhangisa ekhaya, ehhovisi, esitolo, esontweni, esontweni, njll.
Iphrinta ye- USB Flash Disk uhlobo lwemishini ye-"type non-contact" ye-jet uhlobo lwe-digital, uhlelo lokusebenza lokubuyekeza lwe- USB Flash Disk lukhulu kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo zokubukeza kwe- USB Flash Disk Printer RF-A3UV:
2. Iphrinta ye-USB Flash Disk ayifaki ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. Iphrinta ye-USB Flash Disk ayisebenzi I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Ukubuyekezwa kwephrinta ye-Flash Flash Disk Iphrinta ye-USB Flash Disk ayifaki Iphrinta ye-USB Flash Disk ayisebenzi Ukulungiswa kwephrinta ye-Flash Flash Disk Ukuhlolwa kwephrinta ye-Flash Flash Disk Ukubuyekezwa kwephrinti eqondile ye-USB Flash Disk Ukubuyekezwa kwephrinta ye-UV Flatbed Izinkinga zephrinta ye-Flash Flash Disk